फ्यूज लगाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु के के हुन् | HINEW
फ्यूज होल्डर प्रकारहरू
इनलाइन फ्यूज बाहक
प्यानल माउन्ट फ्यूज होल्डर s
पीसीबी फ्यूज होल्डर
मोटर फ्यूज बाहक
पीसीबी बोर्ड फ्यूज होल्डर माउन्ट
प्यानल माउन्ट फ्यूज बाहक
तार दोहन फ्यूज
अटोमोबाइल फ्यूज होल्डर
फ्यूज ब्लॉक र होल्डरहरू
फ्यूज होल्डर अवलोकन
फ्यूज होल्डर निर्माता
आज साझा गरिएको सामग्री मुख्यतया सेल्फ-रिपेयरिङ फ्यूजहरू इन्क्याप्सुलेट गर्न सकिन्छ कि भनेर हो। जवाफ होईन किनभने स्व-रिकभरी फ्यूज प्याकेजिङ दुई प्रकार्यहरू छन्: निम्न 5x20 फ्यूज होल्डरको।
के आत्म-मरम्मत फ्यूज इनक्याप्सुलेटेड गर्न सकिन्छ?
1. यसले उत्पादनको सामान्य तातो अपव्यय प्रक्रियालाई असर गर्छ र उत्पादनको गति विशेषतालाई अस्थिर बनाउँछ।
2. कडा वा कडा सीलले PTC सामग्रीको भौतिक स्केलिंगलाई असर गर्छ, परिणामस्वरूप उत्पादन असफल हुन्छ।
यो सामान्यतया अतिरिक्त स्व-पुनर्स्थापना फ्यूज उत्पादनहरू प्याक गर्न सिफारिस गरिएको छैन। यदि प्याकिङ आवश्यक छ भने, प्याकेजिङ सामग्रीको छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ।
यदि प्याकेजिङ सामग्री धेरै कडा छ भने, यसले थर्मिस्टरको विस्तारमा बाधा पुर्‍याउँछ र यसको सामान्य प्रयोगलाई असर गर्छ। "नरम" सील सामग्री प्रयोग गर्दा पनि, थर्मिस्टरको गर्मी अपव्यय प्रभावित हुनेछ।
अटोमोबाइल फ्यूज एक प्रकारको वर्तमान फ्यूज हो, जब सर्किट वर्तमान असामान्य यसको मूल्याङ्कन करन्ट भन्दा बढी हुन्छ, फ्यूजले सर्किट सुरक्षाको भूमिका खेल्छ। अटोमोबाइल फ्यूजहरू सामान्यतया अटोमोबाइल सर्किटहरूको अति-वर्तमान सुरक्षाको लागि, साथै औद्योगिक उपकरणहरूको अति-वर्तमान सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिन्छ। अटोमोबाइल सर्किटहरूमा धेरै विद्युतीय उपकरणहरू विभिन्न रंगका तारहरूद्वारा जोडिएका हुन्छन्, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्यूज हुनुपर्छ। थप रूपमा, अटोमोटिभ फ्यूज आपूर्तिकर्ताहरू द्वारा प्रदान गरिएको फ्यूज कोष्ठकहरू समावेश छन् (प्लग-इन मोडेलहरूको लागि उपयुक्त): सानो प्लग-इन फ्यूज कोष्ठकहरू, मध्यम आकारको प्लग-इन फ्यूज कोष्ठकहरू, र ठूलो प्लग-इन फ्यूज कोष्ठकहरू। माथिको सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ, फ्यूज कोष्ठक को छनोट यसको आफ्नै प्रयोज्यता मा निर्भर गर्दछ, मुख्यतया स्थापना आकार, आकार, आकार र फ्यूज कोष्ठक को प्रदर्शन मा निर्भर गर्दछ।
कार फ्यूज कसरी जाँच गर्ने र प्रतिस्थापन गर्ने: यदि कारको प्रयोगको क्रममा विद्युतीय विफलता देखा पर्‍यो भने, यो फ्यूज जलेको कारण हुन सक्छ, त्यसैले यसलाई समयमै बदल्नको लागि अटोमोबाइल फ्यूज आपूर्तिकर्ता खोज्न आवश्यक छ।
1. इग्निशन स्विच बन्द गर्नुहोस् र फ्यूज कभर खोल्नुहोस्।
2. फ्यूज बदल्नुहोस्। ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु।
(१) कृपया फ्यूज बक्सको ढक्कनमा चिन्ह लगाइएको हालको मान अनुसार फ्यूज बदल्नुहोस् र फ्यूजलाई मूल्याङ्कन गरिएको करन्ट भन्दा उच्च करेन्टले प्रतिस्थापन नगर्नुहोस्।
(2) यदि नयाँ फ्यूज तुरुन्तै पुन: फ्यूज गरियो भने, यसले सर्किट प्रणालीमा केहि गडबड हुन सक्छ र सकेसम्म चाँडो ओभरहाल गर्नुपर्छ भनेर संकेत गर्दछ।
(3) यदि त्यहाँ कुनै अतिरिक्त फ्यूज छैन। आपतकालीन अवस्थामा, ड्राइभिङ र सुरक्षामा कुनै असर नगर्ने अन्य उपकरणहरू फ्यूजहरूद्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
माथिको सामग्री हो कि आत्म-मरम्मत फ्यूज इनक्याप्सुलेटेड हुन सक्छ। मलाई आशा छ कि यसले तपाईलाई केहि मद्दत गर्नेछ। Huizhou Maniu इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड 5x20 फ्यूज होल्डर, अटोमोबाइल फ्यूज होल्डर, अटोमोबाइल फ्यूज बक्स, स्विच, सकेट, थर्मोस्ट्याट र यस्तै इलेक्ट्रोनिक अवयवहरूको विकास र उत्पादनमा माहिर छ। बुझ्न स्वागत छ!
तपाईलाई मन पर्न सक्छ
प्यानल माउन्ट फ्यूज
10 amp इनलाइन फ्यूज होल्डर
5x20mm फ्यूज होल्डर
1. फ्यूज सीट को निर्माण
2. फ्यूज होल्डरहरू किन्न र प्रयोग गर्न तपाईंले कुन जाँचहरू गर्न आवश्यक छ
3. फ्यूज धारकहरूलाई कसरी वर्गीकृत गर्नुपर्छ
4. ढिलो फ्यूज र फ्यूजको शक्ति कसरी छुट्याउन सकिन्छ
5. अपरेशन मोड र फ्यूज होल्डरको तापमान आवश्यकताहरू
पोस्ट समय: जनवरी-06-2022
टोong किओओ जेन लियान फा दा डाओ गुआ Hu हु लु, झोk्काइ जिल्ला, हुइझाउ शहर
+86 13 13368686855554444
© प्रतिलिपि अधिकार - २०१-20-२०२२: सबै अधिकार सुरक्षित।